> Resource > Video > Sida loo geliyaan MOV (Quicktime) si YouTube Effortlessly
Ma MOV gali kartaa in YouTube? Dad badan ayaa qabsadaan MOV videos la kaamirada ama camera, ka dibna doonayaan inay geliyaan footages kuwaas MOV in YouTube wadaaga qoyska iyo saaxiibada. Si kastaba ha ahaatee, caadi ahaan waxay ka soo gudbaya dhibaato noocan oo kale ah: files MOV ma waxaa laga garan karaa YouTube, laakiin waxa uu si rasmi ah u sheegay in MOV yahay. Waa maxay arrinta? First, aan aragno YouTube taageeray qaabab.
Haddii file MOV aad aan encoded la video iyo codec audio kor ku xusan, waxa doonaa aan la aqbali by YouTube. Taasi waa sababta. Si aad u geliyaan in ay si guul leh YouTube, aad leedahay si loogu badalo MOV in YouTube taageeray qaabab hore. Taas aawadeed, qaylqaylin sahlan in la isticmaalo weli awood badan Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waxaa lagu soo bandhigay buugan.
Intaa waxaa dheer, sida lagu yaqaan in ay dhan, YouTube ma aan aqbali doono file ah oo aad iyo aad 10 daqiiqo. Haddii file MOV waa waqti aad u dheer in ay geliyaan, app this sidoo kale ha kartaa in aad u kala qaybsan tahay in dhererka gaar ah si fudud. Next, waxaana idin tusin doonaa geeddi-socodka oo dhan. Waa arrin sahlan, kaliya saddex tallaabo.
1 dar files MOV in MOV si Converter YouTube
Si aad ku dari MOV in MOV si ay Converter YouTube, waxaad sidoo kale ku dhufatey "Add Files" button ee geeska bidix ee sare si ay u sameeyaan ama si toos ah jiidi files bartilmaameedka in this app ee Murayaad bidix.
2 Dooro horena ah si toos ah u-filaayo in YouTube
Tani app smart si toos ah waxay bixisaa dadka isticmaala qaab filaayo in YouTube. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doorasho sida qaab wax soo saarka. Marka dhinaca midigta ee interface ugu weyn, guji image qaabka, ka dibna tag "qaab"> "Web"> "YouTube".
Fiiro gaar ah: Haddii aad file MOV waa waqti aad u dheer in ay geliyaan si ay u YouTube, aad dillaaci kara in dhererka gaar ah (aan ka badnayn 10 daqiiqo). Marka hore, guji "Edit" ikhtiyaarka kasta bar file video ag. Labaad, si fudud u jiidi oo hoos u labada bogagga in ay doortaan clip aad rabto in suuqa kala goo ah. Saddexaad, guji icon maqas-sida ka dibna ku dhuftay Ok si loo badbaadiyo goobta.
3 Beddelaan iyo MOV geliyaan si ay u YouTube
Burcad diinta video adigoo gujinaya "Beddelaan" button ee geeska gacantiisa midig hoose ee MOV si YouTube ee interface. Habka kaliya oo dhan aad kharash dhowr daqiiqo. Marka lagu sameeyey, ogeysiis ku tusi doona, oo wuxuu ku yidhi dhammaan howlaha ay dhammaadeen.
Hadda, waxaad gali kartaa faylasha wax soo saarka si ay u YouTube aad si habsami leh. Ma heli karaa files wax soo saarka? Just ku dhufatey "Output Open" doorasho hoose si aad u dhaqso u samee.